FUNAAB Yevadzidzi 'Portal www.unaab.edu.ng/ Dzazvino Kunyorera Portal: Yazvino Chikoro Nhau
FUNAAB Yevadzidzi 'Portal www.unaab.edu.ng/ Tarisa Dzazvino Kunyorera Portal
FUNAAB Vadzidzi Portal: Kana iwe uchitsvaga yepamutemo chinongedzo kuti upinde muYunivhesiti yeZvivakwa Abeokuta portal, saka iwe uri kurudyi peji.
Muchikamu chino, iwe uchadzidza nezve iyo FUNAAB mudzidzi portal. Mune iyo portal iwe unogona kuita zviitiko senge: kutarisa semhedzisiro, kubhadharisa fizi yechikoro, tarisa mhedzisiro yemesita uye kunyoresa makosi
Zvakare, igwara revachangobva kubvumidzwa (freshers) uye vadzidzi vanodzoka. Zvakare, mune ino chinyorwa, iwe unosvika pakuziva zvakawanda nezve iyo Federal University yeAgriculture, Abeokuta, Ogun State.
Welcome to Federal University Yezvekurima, Abeokuta, Ogun State (FUNAAB)
The Federal University Yezvekurima, Abeokuta, Ogun State (FUNAAB) yakavambwa muna Ndira 1, 1988. Uye izvi zvaive neFederal Government apo mana maUniversity of Technology, akambobatanidzwa muna 1984, vakadzikiswa.
Izvi zvakatungamira mukugadzirwa kwemaviri maUniversity ekurima muAbeokuta neMakurdi. Zvakare, pazuva rimwe chetero, Purofesa Nurudeen Olorun-Nimbe Adedipe akagadzwa semapiyona Mutevedzeri Chancellor weYunivhesiti.
Zvakare, pamberi pokubuda kweUNAAB, iyo Federal Hurumende yakanga yaumba iyo Federal University yeTekinoroji, Abeokuta (FUTAB) mu1983. Uyezve, mu1984, yakasanganiswa neYunivhesiti yeLagos.
Nekudaro, yaive iine zita rayo rakachinjirwa kuKoreji yeSainzi neTekinoroji, Abeokuta (COSTAB), pamberi pekubviswa kwaNdira, 1988. Padanho rekutanga, maKoreji mashanu akaunzwa kuYunivhesiti muna Gumiguru 1988 seinotevera:
Koreji yeKurima Management, Rural Development uye Zvidzidzo (COLAMRUD).
Uyewo, Koreji yeZvipfuyo Sayenzi uye Mombe Kugadzirwa (COLANIM).
Koreji yeEnharaunda zviwanikwa Management (COLERM).
Uyewo, Koreji ye Natural Sayenzi (COLNAS).
Koreji Yezvirimwa Sayenzi uye Crop Kugadzirwa (COLPLANT)
Kukosha FUNAAB Vadzidzi 'Portal
Kana iwe uri kutsvaga yeFUNNAB Mudzidzi Portal yekupinda, mhedzisiro yaunoda iri pazasi. Nekudaro, zvisati zvaitika, ngatitarisei kukosha kweiyi portal.
Pazasi pane makuru mabhenefiti eFUNAAB mudzidzi Portal:
FUNAAB Yevadzidzi Portal
The FUNAAB Yevadzidzi Portal inogona kuwanikwa kuburikidza nehukama pazasi:
FUNAAB Mudzidzi Portal: https://portal.unaab.edu.ng/pt/, https://www.admission.unaab.edu.ng/
Zvakare FUNAAB Mudzidzi Login Portal: https://admission.unaab.edu.ng/login.php, https://unaab.edu.ng/2012/08/historical-background/
Zvakare, iwe unogona kushanyira uye kuwana iyo University of Agriculture Abeokuta Mudzidzi Portal uchishandisa komputa kana nhare kuburikidza zvinotevera zvinongedzo:
FUNAAB Mudzidzi Portal: https://portal.unaab.edu.ng/
Yepamutemo FUNAAB Webhusaiti:https://unaab.edu.ng/
Kugamuchirwa muFederal University Yezvekurima, Abeokuta FUNAAB iri kukwikwidza uye inosanganisira zvinotevera maitiro:
Kunyoresa Pamhepo Kunyorera pane ino webhusaiti.
Pre-Admission Screening Exercise (Computer-yakavakirwa) - UTME uye DE vavhoterwa.
Nekudaro, vanobudirira musarudzo mukati mekugona kwesangano redu vanozopihwa kubvumidzwa. Ivo vanodikanwa kuti vapinde zvakanyanyisa ICT Kudzidziswa uye Chirongwa Chirongwa chekuvagadzirira ivo hupenyu muFUNAAB.
FUNAAB 2021 Yekugamuchira Maitiro uye Zvinodiwa
Vese vanyoreri vanotsvaga undergraduate kudzidza kupinda mu100, 200 uye 300 Levels muFederal University of Agriculture, Abeokuta (FUNAAB) vari kukokwa kunyorera online kune iyo 2021 Pre-Admission Screening Exercise.
Nekudaro, kunyorera kunofanirwa kuve kubva kune vanokwanisa kukwikwidza musarudzo. Zvakare, ivo vanofanirwa kunge vakasarudza FUNAAB seVo Yekutanga Sarudzo yeInstitution neJoint Admissions uye Matriculation Board (JAMB).
Zvakare, vanyoreri vanofanirwa kuve nezvidiki zvekupinda zvinodiwa zveshanu (5) O 'Chikamu Chekubhadhara Uye izvi zvinofanirwa kunge zviri muzvidzidzo zvinoenderana pane imwechete kana maviri zvigaro muSSCE / GCE / NECO / NABTEB uye zadza mhedzisiro online.
Pamusoro pezvo, vanyoreri vanorayirwa kuti vasimbise iyo Zvinodikanwa zveKubvuma muzvirongwa zveDhigirii usati wapinda mukati kuti uzadze fomu re-fomu.
Uyezve, ndokumbirawo muone kuti ivo chete vanyoreri vane basa rakapedzwa nguva yakatarwa isati yatarisirwa.
Zvakare, ita shuwa kuti iwe unopa chaiyo bio-data uye ruzivo rwezvidzidzo kana uchizadza yako chikumbiro fomu.
FUNAAB PG (Chikoro chePostgraduate)
FUNAAB Postgraduate Chikoro chakagadzwa uye chakapihwa, nemutemo, mutoro we "kufambisa pamwe nekudzora kwemhando yepamusoro kwezvidzidzo zvekupedza kudzidza ku Federal University of Agriculture, Abeokuta (FUNAAB) ”.
Zvakare, mutemo unopa kuti “Zvidzidzo zvePashure pekupedza zvinosanganisira zvirongwa zvese zvedzidzo nehunyanzvi. Izvi zvinoda kubudirira kwevadzidzi kupfuura padanho repashure mune chero munda. Zvakare, kazhinji inotungamira kune akasiyana mibairo.
Zvakare, FUNAAB PG inovavarira kupa ruzivo rwakakosha uye hunyanzvi zvinotungamira mukuwaniswa nemudzidzi wehunyanzvi hwepamusoro mune imwe ndima yezvekurima, masango, mainjiniya kana sainzi yekutanga.
Zvinangwa zveFederal University Yezvekurima, Abeokuta PG
FUNAAB PG inovavarira kupa ruzivo rwakakosha uye hunyanzvi hunotungamira mukuwaniswa nemudzidzi wehunyanzvi hwepamusoro mune imwe ndima yezvekurima, masango, mainjiniya kana sainzi yekutanga.
Izvi zvinangwa zviri kusangana kuburikidza nesangano remusanganiswa wakakodzera wezvidzidzo zvemberi. Zvakare, izvi zviri kuburikidza nekupihwa kwakanakisa kwekutsvaga uye raibhurari zvivakwa. Uye zvakare pamwe nekudzidzisa uye kutarisa neane ruzivo rwakanyanya postgraduate vashandi vezvidzidzo.
Pamusoro pezvo, muzhinji, kuyedza kukuru kuri kuitwa nguva dzese neyunivhesiti kupa mamiriro akanaka ekudzidza kwapashure pekupedza kudzidza.
FUNAAB Vadzidzi 'Portal Login
Ziva kuti iwe unogona kushanyira uye kuwana iyo Federal University Yekurima Abeokuta (FUNAAB) Mudzidzi Portal uchishandisa komputa kana nhare nekutevera zvinongedzo zvakapihwa zvakateerana.
FUNAAB Mudzidzi Portal Pamhepo https://portal.unaab.edu.ng/
Zvakare, FUNAAB Yepamutemo Webhusaiti http://www.unaab.edu.ng/
FUNAAB Registrar Bata [email inodzivirirwa]
Federal University Yezvekurima, Abeokuta PG Zvinongedzo
The Federal University of Agriculture Abeokuta (FUNAAB) Chikoro chePostgraduate Zvidzidzo (SPS) mudzidzi login portal inogona kuwanikwa kuburikidza neiyi link iripazasi. Kuti uwane rumwe ruzivo uye kubvunza, iwe unogona kubata iyo chikoro portal.
FUNAAB Postgraduate Vadzidzi Portal: http://pg.unaab.edu.ng/
Yepamutemo FUNAAB Webhusaiti: http://naab.edu.ng/
Maitiro Ekuchinja / Kugadzirisazve FUNAAB SPS Vadzidzi 'Portal Login password
Wakanganwa password yako kuti upinde mukati meiyo portal? Usanetseke, ndokumbirawo uteedzere nhanho idzi kuti utore kana kushandura password yako:
Kutanga, enda kuPortal Login skrini
Zvakare, zvinotevera, tinya pane Wakanganwa /Change Password, zadza uye nyora zvinodiwa
Pamusoro pezvo, tinya pane bhatani rekutumira
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo Federal University Yezvekurima Abeokuta (FUNAAB) Chikoro chePostgraduate Zvidzidzo (SPS) yekupinda portal yemudzidzi, unogona kutumira email kune kunyoresa, [email inodzivirirwa].
Zvakare, vadzidzi vanogona kushanyira dhipatimendi ravo kune chero dambudziko rinowanikwa pane yavo mbiri kana panguva yeiri pamusoro maitiro.
Nekudaro, kana iwe uine chero mubvunzo kana kururamisa zvine chekuita neichi posvo, nemutsa donhedza chirevo pazasi uye isu tichazvipindura pazviri nekukurumidza. Uye iva munzanga nekugovana ichi chinyorwa nevamwe.
Geology, Geochemistry uye Petrogenesis yeGranite Suites uye Pegmatites kuchamhembe Chikamu cheMandara Hills Gwoza Sheet 114, Northeastern Nigeria
Yunivhesiti yeSydney International Research Scholarship 2021/2022 Kwidziridzo
JAMB CBT Yakatenderwa Nzvimbo 2021 muNigeria uye Abroad kune Kunyoresa
RSUST Inowedzera Pre-degree Chikumbiro Deadline - 2016/17
Nongedzo paMabatiro Ekusarudza Akanakisa Ekunyora Pamhepo Services mu2020
Regency Alliance Inishuwarenzi Plc Kutora Kwekushambadzira Executive 2018
YABATECH Cheka Kunze Mako 2021/2022 Tarisa Izvozvi Dhipatimendi Cheka Kunze Point
Tags: funaab 2020/2021 maitiro ekugamuchira uye zvinodiwa, funaab kubvuma, funaab portal yevadzidzi, funnab pg portal yevadzidzi, kukosha kweiyo funaab portal yevadzidzi
« OFFA Poly Portal www.portal.fpo.edu.ng/admission.aspx Tarisa Dzazvino Dzokorora
BIU Portal www.biu.edu.ng/ Tarisa Dzazvino Chishandiso Kugadziridza 2021 »